Chiellini oo ka warbixiyay sababtii uu ugu guuldareystay inuu u dhaqaaqo Real Madrid 2010-kii – Gool FM
(Italy) 26 Maajo 2019. Daafaca reer Talyaani iyo kooxda Juventus ee Giorgio Chiellini ayaa wuxuu shaaca ka qaaday sida uu ugu guul darreystay inuu u ciyaaro Real Madrid sanadii 2010-kii.
Giorgio Chiellini ayaa u soo ciyaaray Juventus muddo 14 sano ah, wuxuuna qeyb ka ahaa ciyaartoydii ku sugneyd kooxda kaddib markii ay hoos ugu dhacday heerka labaad, sababa la xiriira in lagu eedeeyay fadeexadii caanka ahayd Calciopoli ee sanadkii 2006-dii.
Tan iyo muddadaas, Chiellini ayaa wuxuu kula guuleystay kooxda Juventus 8 horyaal oo Serie A ah, wuxuuna 2 jeer gaaray final-ka Champions League, isagoo sidoo kale ku guuleystay dhowr koob kale ee ah gudaha dalka Talyaaniga.
Laacibkan heerka caalami xulka qaranka Talyaaniga ee Giorgio Chiellini ayaa xirtay calaamada kabtanimada ee kooda Juventus xilli ciyaareedkan kaddib markii uu baxay Gianluigi Buffon.
Hadaba Giorgio Chiellini ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska caanka ah ee “Tuttosport” wuxuu ku sheegay”.
“Sanadkii 2010 waxaa jirtay suurtogalnimo aan ugu biiri karay kooxda Real Madrid”.
“Xilli ciyaareedkii xigay, sida la rabay uma fiicneyn, laakiin waxaan hagaajiyay dhibaata kasta ee iga heysatay mustaqbalkeyga kooxda, sababtaas darteed kama tagin Talyaaniga”.
Si kastaba daafaca reer Talyaani iyo kooxda Juventus ee Giorgio Chiellini ayaa wuxuu hadalkiisa ku soo xiray inuu doonayay inuu mar uun ka ciyaaro meel ka baxsan Talyaaniga.